"Indlu yangoku kwisikhululo sikaloliwe"
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguEvans
Indawo entle kraca entsha ebekwe kwimizuzu esi-8 kuphela ukusuka eSkanderbeg Square (Iziko). Yindlu yangoku, ene-air-conditioning❄️🔥, indawo yokupheka epheleleyo. Indawo yokuhlala icwangciswe ngegumbi elinye lokulala kunye nendawo yokuhlala enekhitshi elincinci eligcweleyo👨🏼‍🍳.
🚶🏼‍♂️8 imizuzu kude IZIKO
🚶🏼‍♂️ umzuzu oyi-1 kude ne-BOULEVARD ENTSHA
🚶🏼‍♂️10 imizuzu kude I-BAZAAR ENTSHA
🚶🏼‍♂️15 imizuzu TOPTANI CASTLE
🚕15 imizuzu ukusuka TIRANA AIRPORT
Inegumbi lokulala elibanzi elinebhedi ephindwe kabini 🛏, iTV📺 encinci kunye nezinye iifanitshala zokubeka izinto zakho zobuqu.
Kwelinye igumbi kukho ibhedi yekona, iSmart TV 50 ”(Netflix, Spotify, Youtube njl) kunye nezinto ezongezelelweyo onokuthi uzifune.
Ikhitshi inesitovu, indawo yokuhlamba izitya, iaspirator, ifriji, kunye neekhabhathi ezininzi ezizaliswe zizixhobo zasekhitshini kunye nezinto eziyimfuneko + itafile yabane.
Igumbi lokuhlambela lixhotyiswe ngendlu yangasese, isinki, ishawa kunye nesitya sokuhlamba, iemele, imophu, ipani kunye nomtshayelo.
Kananjalo unokufumana i-balcony encinci enokufikeleleka kuwo omabini amagumbi. 🚬
Indawo ikhuselekile kakhulu
45" HDTV ene-izitishi zeTV eziqhelekileyo
Yindawo ezolileyo nekhuselekileyo. Apha ungafumana yonke into oyifunayo.
Indawo yokuhlala ikhona:
🚶🏼‍♂️10 imizuzu kude kwi-BAZAR ENTSHA
Umbuki zindwendwe ngu- Evans
Hi! I am Evans from Tirana and I love Airbnb as a host and a guest! I traveled and still travel a lot with Airbnb which helped me to learn what a guest needs to make his stay perfect! I am a real night-lifer so if you look for some recommendations of fancy bars or clubs l am more than happy to give you some tips.
Hi! I am Evans from Tirana and I love Airbnb as a host and a guest! I traveled and still travel a lot with Airbnb which helped me to learn what a guest needs to make his stay perfe…
Ndizakubulisa xa ufika 🙋🏻‍♂️ ndikubonise indawo. Ukuba ungathanda ndingakunika iingcebiso kunye nezalathiso eziya kwiindawo zokutyela🍕bar🍻, iivenkile ezinkulu🌽, inyama🍗 kunye neemarike zentlanzi🐟 (zonke ezi zikufutshane kakhulu).
Ungandibuza yonke into nanini na. Ndisoloko ndifumaneka ukuze ndifumane uncedo.
Ndizakubulisa xa ufika 🙋🏻‍♂️ ndikubonise indawo. Ukuba ungathanda ndingakunika iingcebiso kunye nezalathiso eziya kwiindawo zokutyela🍕bar🍻, iivenkile ezinkulu🌽, inyama🍗 kunye…